» मिस नेपालमा रोज लामाको चर्चा, ट्यालेन्ट राउण्डमा कसले के गरे ?
मिस नेपालमा रोज लामाको चर्चा, ट्यालेन्ट राउण्डमा कसले के गरे ?
७ बैशाख २०७६, शनिबार ०७:१७
चन्द्र घलान/हेटौँडा, ७ बैशाख । मिस नेपालले अहिले सफलताको २५ औँ वसन्तमा पाईला टेकेको छ । यतिखेर नेपालका विभिन्न भागबाट सहभागी भई छनौट भएका उत्कृष्ट २५ सुन्दरीहरु मिस नेपालको प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । आज हामीले मिस नेपाल २०१९ को ट्यालेन्ट राउण्डका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ । उत्कृष्ट २५ हरुमध्ये कसले के प्रतिभा देखाए ? हामीले यस भिडियोमा छोटकरीमा चर्चा गरेका छौँ । कृपया पुरै भिडियो हेरेर तपाईलाई लागेका कुराहरु कमेन्ट गर्नुहोला । साथै प्रतियोगीहरुमध्ये कसको प्रतिभा राम्रो लाग्यो ? को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ ।
मिस नेपालको उत्कृष्ट २५ मा काठमाडौँकी निशा पाठक, पोखराकी एलिशा जोशी, काठमाडौँकी सोफिया भुजेल, रिया बस्नेत,अनुष्का श्रेष्ठ, जेन्नी महर्जन, ललितपुरकी अस्मिता महर्जन, काठमाडौँकी किरण थापा, प्रदिप्ता अधिकारी, ललितपुरकी निकिता कर्मचार्य, काठमाडौँकी रोज लामा,पोखराकी सारा बजिमाया, हात्तिवन ललितपुरकी लक्ष्मी राउत, काठमाडौँकी रक्षा उप्रेती, भक्तपुरकी मीरा कक्षपति, मोरङकी जेनिशा थपलिया, झापाकी पुजा श्रेष्ठ, चितवनकी विपना सुवेदी, ललितपुरकी सुभेच्छा अधिकारी, झापाकी प्रकृति कट्वाल, चितवनकी न्यान्सी बोगटी, भैरहवाकी शिवानी घिमिरे, काठमाडौँकी सान्त्वना मालाकार, प्रथा अधिकारी र भैरहवाकी संस्कृति घिमिरे रहेकी छिन् । उत्कृष्ट २६ मा परेकी पुनम पन्तले आफ्नो जागिरका कारण मिस नेपालको यात्रा छोडेपछि उत्कृष्ट २५ प्रतिस्पर्धीहरुले मात्रै बैशाख ५ गते भएको ट्यालेन्ट राउण्डमा सहभागी भएका थिए । उनीहरुले आफुमा भएका विभिन्न प्रतिभाहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सहभागीहरुले नृत्य, पेन्टिङ सहित अन्य विभिन्न ट्यालेन्टहरु प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुमध्ये उत्कृष्ट प्रतिभा भएकालाई मिस ट्यालेन्टको उपाधि दिइने छ । हेरौँ उनीहरुका प्रतिभाहरु–
१) निशा पाठक–निशा पाठक, काठमाडौँबाट छनौट भएकी हुन् । २२ वर्षीया निशा ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा परम्परागत नृत्य प्रस्तुत गरेर सबैको मन जितेकी थिईन् ।
२) एलिशा जोशी– पोखराकी एलिशा जोशी ५ फिट ५ ईन्चकी छिन् । उनी २३ वर्षकी छिन् । उनले मिस ट्यालेन्ट राउण्डमा परम्परागत बाजा बजाएकी थिईन् ।
३) सोफिया भुजेल–काठमाडौँबाट छनौट भएकी सोफिया भुजेल ५ फिट ८ ईन्च उचाईकी छिन् । उनी २३ वर्षकी छिन् । उनले बैँग्लोरमा पार्ट टाईम मोडलिङ समेत गरेकी थिईन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या र महिला दमनका घटनालाई लिएर कविता वाचन गरेकी थिईन् ।
४) रिया बस्नेत– रिया बस्नेत काठमाडौँबाट छनौट भएकी हुन् । २२ वर्षीया रिया ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् । आहा बनमा फुल्यो फुलै फुल बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
५) संस्कृति घिमिरे– भैरहवाबाट छनौट भएकी सँस्कृति घिमिरे २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटर साईन्समा ग्राजुएसन गरेकी उनी सफ्टवयर इन्जीनियर र बिजनेस एनालिष्टका रुपमा कार्यरत छिन् । उनले मिस ट्यालेन्टमा कता कता छौ कुन रुपमा बोलको गीत गाएकी थिईन् ।
६) अनुष्का श्रेष्ठ– काठमाडौँकी अनुष्का श्रेष्ठ २३ वर्षकी छिन् । अनुष्का ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा पेन्टिङ बनाएकी थिईन् ।
७) जेन्नी महर्जन– काठमाडौँकी जेन्नी महर्जन २४ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । मिस ट्यालेन्ट राउण्डमा उनले परम्परागत नेवारी बाजा बजाएकी थिईन् ।
८) अश्मिता महर्जन– ललितपुरकी अश्मिता महर्जन २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् । मेकअप काण्डका कारण थप चर्चामा पुगेकी उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा चर्चित गायक दिपक बज्रचार्यको बहुचर्चित गीत मन मगनमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
९) किरण थापा–काठमाडौकी किरण थापा २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा चर्चित गायिका तिृष्णा गुरुङको आवाजमा रहेको माया पिरती बोलको गीत गायकी थिईन् । गुरुङ चलचित्र ‘प्रेस्यो’ मा समावेश यो गीत ओरिजनल्ली गुरुङ भाषामा भएता पनि गायिका तृष्णा गुरुङले यसलाई नेपालीमा कभर बनाएकी थिईन् ।
१०) प्रदिप्ता अधिकारी– काठमाडौकी प्रदिप्ता अधिकारी २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा महिला सशक्तिकरणमा लागेकाहरुलाई समर्पित गर्दै पानीको फोका जस्तै बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
११) निकिता कर्मचार्य– ललितपुरकी निकिता कर्मचार्य २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा घिन्ताङ घिन्ताङ मादल बज्यो बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
१२) रोज लामा– काठमाडौकी रोज लामा २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । मिस नेपाल क्यालेफोर्निया २०१७ की बिजेता समेत बनिसकेकी रोज लामाले ट्यालेन्ट राउण्डमा पेन्टिङ बनाएकी थिईन् । उनले कानुनमा पहिलो पटक पिएचडी गरेकी नेपाली महिला, समाजसेवी एवम् प्रोफेसर डाक्टर शान्त थपलियाको तस्बिरलाई क्यानभाषमा उतारेकी थिईन् । उनको पेन्टिङ कलाको अहिले सर्वत्र चर्चा समेत भईरहेको छ ।
१३) सारा बजीमाया– पोखराकी सारा बजीमाया २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । मिस पोखरा २०१८ की विजेता समेत रहेी सारा बजिमायाले परम्परागत नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
१४) लक्ष्मी राउत– लक्ष्मी राउत हात्तिवन ललितपुर निवासी हुन् । उनी बिजनेश स्टडीमा मास्टर्स अध्ययनरत छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा म हिँड्दैछु बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
१५) रक्षा उप्रेती– काठमाडौकी रक्षा उप्रेती २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले मिस नेपालको ट्यालेन्ट राउण्डमा वक्तव्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
१६) मीरा कक्षपति– भक्तपुरकी मीरा कक्षपति २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ४ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा खुशी हुने उपायहरुका बारेमा वक्तव्य दिएकी थिईन् । सानैमा आफुलाई बोलेर खान्छ भनेर ज्योतिषले भनेको सम्झँदै उनले आफु साँच्चै एमसी गरेरै अगाडि बढिरहेको बताईन् ।
१७) जेनिशा थपलिया– मोरङकी जेनिशा थपलिया २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । जेनिशाले ट्यालेन्ट राउण्डमा राम्री पनि भाकी छु बोलको गीतमा आकर्षक नृत्य गरेकी थिईन् ।
१८) पुजा श्रेष्ठ– झापाकी पुजा श्रेष्ठ २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा डालीडाली फुल फुल्यो बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
१९) विपना सुवेदी– चितवनकी विपना सुवेदी २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् । विपनाले ट्यालेन्ट राउण्डमा समिर आचार्य र विद्या तिवारीको चर्चित गीत पिच रोडमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
२०) सुभेच्छा अधिकारी– ललितपुरकी सुवेक्षा अधिकारी २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । सुभेच्छाले ट्यालेन्ट राउण्डमा आफ्नो कला प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
२१) प्रकृति कट्वाल– झापाकी प्रकृति कट्वाल २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । प्रकृतिले ट्यालेन्ट राउण्डमा परिक्षाका समयमा हुने विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानमा आधारित रहेर कमेडी अभिनय प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
२२) न्यान्सी बोगटी– न्यान्सी बोगटी चितवनबाट छनौटमा परेकी प्रतिस्पर्धी हुन् । उनी २४ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ५ ईन्च उचाईकी छिन् । उनले ट्यालेन्ट राउण्डमा गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
२३) शिवानी घिमिरे– भैरहवाकी शिवानी घिमिरे २१ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ७ ईन्च उचाईकी छिन् । ट्यालेन्ट राउण्डमा उनले युवा अवस्थाका भावनाहरु समेटेर कविता वाचन गरेकी थिईन् ।
२४) सान्त्वना मालाकार– काठमाडौकी सान्त्वना मालाकार २२ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ६ ईन्च उचाईकी छिन् । ट्यालेन्ट राउण्डमा सान्त्वनाले लहनाले जुरायो कि बोलको गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।
२५) प्रथा अधिकारी– काठमाडौकी प्रथा अधिकारी २३ वर्षकी छिन् । उनी ५ फिट ९ ईन्च उचाईकी छिन् । ट्यालेन्ट राउण्डमा प्रथाले नेपाल आमा शिर्षकमा अभिनय गरेकी थिईन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला । उत्कृष्ट २५ मध्ये ट्यालेन्ट राउण्डमा तपाईलाई कस्को प्रतिभा राम्रो लाग्यो ? कमेन्ट गर्नुहोस् है । तपाईको विचारमा को बन्न सक्छिन् मिस नेपाल २०१९ ? यसको जवाफ पनि कमेन्टमा लेख्न सक्ुनहुनेछ । साथै यो भिडियोलाई लाईक र शेयर गरिदिनुहोला र अन्य भिडियोका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्न नभुल्नुहोला ।